साथी बितेपछि श्रीमतिलाई फकाएर के गरे यस्तो ? बिहे गर्ने दवाव दिएपछि सन्सारबाटै गरिदिए बिदा – PathivaraOnline
Home > समाचार > साथी बितेपछि श्रीमतिलाई फकाएर के गरे यस्तो ? बिहे गर्ने दवाव दिएपछि सन्सारबाटै गरिदिए बिदा
Poonam June 18, 2021 समाचार	0
मोरङमा भएको दुखद घटनाको रहस्य प्रहरीले पत्ता लागेको थियो । झण्डै डेढ महिना अघि भएको एक घटनाको जरोसम्म पुग्न प्रहरी सफल भएको हो । मकैबारीमा शव फेला परेको घटना अहिलेसम्म रहस्यमय मानिदै आएको थियो । तर प्रहरीका अनुसार प्रेममा परेकी सरितालाई उनकै प्रेमीका रुपमा देखिएका सुफल हस्दाले यो सन्सारबाट बिदा गरिदिएको खुलेको हो ।
घटनापछि अनुसन्धानका क्रममा दुवैबीच ६ महिनादेखि प्रेम थियो । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा सरिताले विवाह गरी घर लैजान हस्दासमक्ष कर गरेका कारण घटना भएको खुलेको छ जसलाई तत्काल अस्वीकार गरेका हस्दाले सरितालाई त्यस्तो गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सुफलले भने दुईवटा बिहे गरिसकेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार घरमा सुफलका दुई श्रीमती र तीन सन्तान छन् । सरिता पनि एक सन्तानकी आमा हुन् । सरिताका पति बितेपछि सुफल नजिकिएका थिए । उनीहरुबिच पति पत्निबिच हुने सबै कुरा भएको र बिहे गर्न आग्रह गर्दा यस्तो घटना भएको प्रहरीले बताएको छ ।
हातखुट्टा कुहिएर नचल्ने भएका छोरा मोहन भन्छन् : “मलाई छोरो भएर बाच्नुको कुनै अधिकार छैन, बाउको काजक्रिया समेत गर्न सकिन, नसाथमा पैसा छ, नमर्न सके नबाच्न नैसके ।”
साइन्टिस्ट बन्ने सपना देख्थिन् दिशा, मोडलिङले बन्यो बलिउड करियर
छोरो द भ्वाइस अफ नेपालमा गीत गाउदै गर्दा उता आमाको मृत्यु, अधुरो भो छोरोलाइ भ्वाइस जिताउने सपना !
अन्तर-जातीय बिहे गरेका जोडीलाई छुटाईदिएपछि केटाले यसो भने